सपनामा खाना खाँदै गरेको देख्नुको मतलव के ? « Lokpath
२०७७, १७ फाल्गुन सोमवार ०६:३९
प्रकाशित मिति : २०७७, १७ फाल्गुन सोमवार ०६:३९
काठमाडौं । सपना त हामीले देखेका नै छौँ । तर तपाईले सपनामा खाना खाँदै गरेको देख्नु भएको छ भने त्यसको अर्थ के होला ? भन्ने जिज्ञासा तपाईलाई अवश्य नै परेको होला । आज हामी सपनामा खाना खाईरहेको देख्नुको मतलव के हो भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौँ ।
स्वप्न शास्त्रका अनुसार हामीले सपनामा खाना खाईरहेको देख्यौँ भने त्यसको अर्थ हाम्रो जीवन कसैले रोक्न नसक्ने मोडमा जाँदैछ भन्ने बुझ्नुपर्दछ । हामीलाई विभिन्न समस्याले सताउँछन् भन्ने जान्नुपर्दछ । तर यस्तो सपना देख्दा रोगी बन्नबाट भने बच्नुहुन्छ ।
यो साता कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) साताको शुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले पढाइ लेखाइमा मन जाने
काठमाडौं । धेरैजसो मानिसहरुको बेलुका ढिला खाना खाने बानी हुन्छ । तर बेलुका
कपाल झर्छ ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय
काठमाडौं । कपाल झर्नु आम मानिसको समस्या हो । यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया
कम्मर दुख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो छ उपचार विधि
काठमाडौं । हुन त कम्मर दुख्ने समस्या विशेषगरी ४५–६४ उमेर समूहको मानिसमा पाइन्छ